स्मार्ट ग्याजेटमा लिप्त हुँदै बालबालिका, कसरी छुटाउने लत? - VOICE OF NEPAL TV
स्मार्ट ग्याजेटमा लिप्त हुँदै बालबालिका, कसरी छुटाउने लत?
१५ आश्विन २०७८, शुक्रबार १८:३०
अहिले अधिकांश बालबालिकाहरु नजानिँदो ढंगले स्क्रिनमा लिप्त हुँदै गएका छन्। उनीहरू मोबाइल, ल्यापटप, टिभी वा ट्याबलेटको स्क्रिनभन्दा बाहिरको संसारबाट बेखबर हुँदैछन्। कार्टुन, भिडियो गेम, भिडियोमा लिप्त भइरहेका बालबालिकालाई यसले एकोहोरो बनाइरहेको हुन्छ।
– बच्चाले व्यतित गरिरहेको स्क्रिन टाइम कटौती गरिदिने
– बच्चालाई घरभित्रै वा कोठाभित्र मोबाइल, ल्यापटमा भन्दा पनि घरबाहिरको खेलकुदमा प्रेरित गर्ने
– बालबालिकासँग अभिभावकले समय बिताउने
– घरका ज्येष्ठ सदस्यहरुसँग समय व्यतित गर्न प्रेरित गर्ने
– बाहिर घुमाउन लैजाने
– बच्चालाई भुलाउन वा खुसी तुल्याउन मोबाइल, ल्यापटप दिने प्रवृत्ति त्याग्‍ने
के तपाईको सिरानीमा मोबाइल राखेर सुत्ने बानी छ ? सावधान रहनुस् है !!
पहेंलो दाँतलाई कसरि चम्काउने ?
कसरि खाना पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुँदैन ? सिक्नुहोस् खाना पकाउने कला !
आफैलाई किन र कसरी माया गर्ने ?
सुत्ने समयमा मोबाइलको प्रयोग गर्नाले यस्ता कुराको लागि खतरा
हामीले खाने कुन खानामा कति कति हुन्छ क्यालोरी ?
भान्सामै पाइने यी ५ खानेकुरा, जसले गर्छ पेनकिलरको काम